May 14, 2021 - Cele Fans
သွေးကင်ဆာ ပျောက်ကင်းခဲ့သူရဲ့ ကိုယ်တွေ့ဆေးနည်း
May 14, 2021 Cele Fans Comments Off on သွေးကင်ဆာ ပျောက်ကင်းခဲ့သူရဲ့ ကိုယ်တွေ့ဆေးနည်း
မင်္ဂလာပါ မိတ်ဆွေတို့ရေ။ ရှားစောင်း လက်ပတ် ရဲ့လက်တွေ့ အကျိူး ကျွန်မ ၁၅နှစ်သမီးးက သွေးကင်ဆာနဲ့ ဆေးရုံတက်ခဲ့ ရပါတယ် ၁နှစ်နီးပါးး မန္တလေးပြည်သူ့ ဆေးရုံမှာ ဆေး ကုသမှုခံ ယူခဲ့တယ် ။ဆေးရုံက ဆင်း တော့ လဲ လူကောင်း တယောက်လို နေခွင့် မရခဲ့ဘူး ခါးရိုး ချဉ်ဆီ အကြိမ်ကြိမ် ဖောက်ခဲ့ ရတဲ့ ဒဏ်ကြောင့် အလုပ် ကြမ်း ဆို ဘာမှ […]
၀မ်းချုပ်တတ်သူများအတွက် အလွယ်ကူဆုံး အိမ်တွင်းနည်းလမ်း လေးများ
May 14, 2021 Cele Fans Comments Off on ၀မ်းချုပ်တတ်သူများအတွက် အလွယ်ကူဆုံး အိမ်တွင်းနည်းလမ်း လေးများ
(၁) နံနက်အိပ်ရာထ သောက်ရေ သုံးခွက်ဆက်တိုက် သောက်ပေးခြင်းက အူတွေကို အလုပ်လုပ်စေလို့ ဝမ်းသွားစေပါတယ်။ (နေ့စဉ် ရေရှစ်ခွက်မှ ၁၀-ခွက်အထိ သောက်တဲ့အကျင့်ကို မွေးမြူပါ) (၂) သံပရာသီးကလည်း ဝမ်းချုပ်ခြင်းမှ သက်သာစေလို့ နံနက်အိပ်ရာထ အစာမစားခင်မှာ ရေနွေး တစ်ဖန်ခွက်ထဲကို သံပရာသီးတစ်လုံး ညှစ်ပြီး၊ ပျားရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းနဲ့ ဆားအနည်းငယ် ဖျော်၍ သောက်လိုက်ပါ။ (၃) ပဲသီး၊ ဟင်းနုနယ် စတဲ့ အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနဲ့ လိမ္မော်သီး၊ သစ်တော်သီးကဲ့သို့ […]
သတိ ! အမြန်လမ်းမှာ မရပ်သင့် မနားသင့် မစားသင့် မပေါက်သင့်သောနေရာများ
May 14, 2021 Cele Fans Comments Off on သတိ ! အမြန်လမ်းမှာ မရပ်သင့် မနားသင့် မစားသင့် မပေါက်သင့်သောနေရာများ
ဒီနေရာလေးကိုသိကြလား ။ဒီနေရာလေးက အမြန်လမ်း ၁၃၅ မိုင်မှာရှိတဲ့ အလယ်ကျွန်းမှာပေါက်နေတဲ့ ထန်းညီနောင်ပါပဲ အဲ့ဒီနားရောက်ရင် ကားရပ်ပြီးသေးပေါက် တာမလုပ်ပါနဲ့ လုပ်တော့ဘာဖြစ်လဲကွာဆိုရင် စမ်းကြည့်လိုက်လေ။ ကားကိုအနားပေးချင်လို့ခဏရပ်မယ်ဆိုရင်လည်း သင့်ကားပေါ်မှာ အညှီအဟောက် အစားအသောက်တွေမပါပါစေနှင့် ။ အထူးသဖြင့်ညဘက် မရပ်နားသင့်ပါ ။ 259 မိုင် သီးကုန်းနားမှာလည်း ညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်။ အခန့်မသင့်လျင် နွားခလောက်သံ ခြူသံတွေကြားရတတ်တယ်။ အဲဒီနားမှာလည်း မနားသင့် သေးမပေါက်သင့်ပါဘူး ။ ကိုယ်တွေ့တွေရှိပါတယ် ။ တံတားဘေးနားတွေမှာနားရင် သတိနဲ့နားပါ […]
May 14, 2021 Cele Fans Comments Off on အိုးလေး ဒိန်ချဉ်လုပ်နည်း တောင်းထားသူတွေအတွက်
ဒီနည်းကတော့ အိုးလေးဒိန်ချဉ်လုပ်နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်လုပ်နည်းတွေ အများအပြား ရှိပါတယ်။ အလွယ်နည်း၊ အခက်နည်း၊ ရောင်းတန်းအတွက် လုပ်နည်း စသဖြင့် အနည်းငယ်စီသာ ကွာခြားပါတယ်။ အလွယ်နည်း ပြောနေတြတာကတော့ နွားနို့ထဲကို ဒိန်ချဉ်ထည့်ထားလိုက်ရင် ဒိန်ချဉ်ဖြစ်သွားတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဒိန်ချဉ်အနည်းငယ်ကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အဲဒါကို အခု စပြောပြပါမယ်။ အိုးကို မြေအိုးရှိပါက ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ အခြားအိုးနဲ့လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး နို့အချဉ် စလုပ်ရမယ် ( ကိုယ်ဘာသာအချဉ်မဖောက်ချင်လို့လုပ်ပြီးသားဒိန်ချဉ် […]
ငွေဖြည့် ကဒ်များ ခဲခြစ်လွန်သွားပြီး ပင်နံပါတ်များပျက်ကုန်ရင် ပြန်သုံးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေး
May 14, 2021 Cele Fans Comments Off on ငွေဖြည့် ကဒ်များ ခဲခြစ်လွန်သွားပြီး ပင်နံပါတ်များပျက်ကုန်ရင် ပြန်သုံးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေး
ဖုန်းငွေဖြည့် ကဒ်များ ခဲခြစ်လွန်သွားပြီး ပင်​နံပါတ်​များပျက်​ကုန်​ရင်​ လွှင် ​့မပစ်​ကြပါနက်​ ပြန်သုံးလို့ရတဲ့နည်​းလမ်​း​လေး အသိ​ပေးပါရ​စေ ငွေဖြည့် ကဒ်တိုင်​းရဲ့ ဘေး ဘားကုတ် အောက်တွင် နံပါတ်များ ပါ ပါသည် ၊ ပုံတွင်ပြထားသည့် အတိုင်း ဘားကုတ်ရဲ့ အောက် 160….နှင့် စသော နံပါတ်ကိုဖတ်ပြပြီး သက်ဆိုင်ရာ Call Center များ သို့ ဆက်သွယ်၍ ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ် 👍 Sim ကဒ်​ 3ခု့ရဲ့ […]
May 14, 2021 Cele Fans Comments Off on SOLAR ပြား နှင့် CONTROLLER အကြောင်း သိကောင်းစရာ
( နယ်တွေ မှာ ဆိုလာပြား နှင့် ဘက္ထရီ ကြောင့် မီးလောင်၊ လူသေမူများရှိလာ၍ ဗဟုသုတ အဖြစ်တင်ပြပါသည်။ – ksw ) (၁) ဆိုလာအလင်းလျှပ်စစ်ဆိုသည်မှာ နေရောင်ခြည်အလင်းစွမ်းအင်မှ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သို့ တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲပေးနိုင်သော နည်းပညာ ဖြစ်ပါ သည်။ နေအလင်းရောင်တွင်ပါဝင်သော အလင်းမှုန်များမှ ဆိုလာပြား အတွင်းရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်မှုန်များကို ရိုက်ထုတ်ခြင်းဖြင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (၂) ဆိုလာဆဲလ် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ဆိုလာဆဲလ် […]
ဘဏ်တွေရှေ့မှာ ငွေထုတ်ဖို့ အချိန် အကြာကြီးစောင့်နေရတဲ့ ပြည်သူတွေအား သတိပေး ပြောလာတဲ့ မိတ်ကပ် မေဦး
May 14, 2021 Cele Fans Comments Off on ဘဏ်တွေရှေ့မှာ ငွေထုတ်ဖို့ အချိန် အကြာကြီးစောင့်နေရတဲ့ ပြည်သူတွေအား သတိပေး ပြောလာတဲ့ မိတ်ကပ် မေဦး
ပြည်သူများက သူတို့ စုဆောင်း ထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ဘဏ်များတွင်သာ အပ်နှံလေ့ရှိကြ တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ပြည်သူများကရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမယ့် အနာဂတ်တွေကို ကြိုတင်မမှန်းဆနိုင်တော့ရုံသာမကဘဲ ဘဏ်များကိုလည်း ယုံကြည်မှုနည်းပါးလာပြီး သူတို့ရဲ့ ပိုက်ဆံများကို လက်ဝယ်သိမ်းဆည်း ထားချင်တာကြောင့်အခုလို မနက်အစောကြီးထကာ ဘဏ်ရှေ့များတွင် ပင်ပင်ပန်းပန်း စောင့်ဆိုင်းထုတ်ယူနေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်..။ တစ်ချို့ပြည်သူများမှ Curfew အချိန်ထက်စောကာ တန်းစီကြတာကြောင့် ဖမ်းဆီးခံရတာမျိုးလည်း ရှိခဲ့ကြတာ […]
မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန်ကို ပြင်းထန်လွန်းတဲ့ ထောင်ဒဏ် ချမှတ်
May 14, 2021 Cele Fans Comments Off on မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန်ကို ပြင်းထန်လွန်းတဲ့ ထောင်ဒဏ် ချမှတ်
မင်္ဂလာပါ ချစ် ပရိတ်သတ် ကြီးရေ ခုပြောပြပေး မယ့် အကြောင်း လေးကတော့ စကစရဲ့ မထင် မှ တ်ထားတဲ့ ထောင်ဒဏ် ချမှတ် ခြင်းခံလိုက် ရတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စကစ အာဏာ စသိမ်း ကတည်းက ပြည်သူနဲ့ တသွေးထဲ တစ်သားတည်း ရပ်တည် ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ် မင်း သားချော ပိုင်တံခွန်ကတော့ စကစ မှ ဖမ်းဝရမ်း […]
“၃လကျော်ကာလအတွင်း ဦးဇော်ဇော်ကို ပထမဆုံးပြန်လည် မြင်တွေ့ရခြင်းဖြစ်”
May 14, 2021 Cele Fans Comments Off on “၃လကျော်ကာလအတွင်း ဦးဇော်ဇော်ကို ပထမဆုံးပြန်လည် မြင်တွေ့ရခြင်းဖြစ်”
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်၏ (၄)ကြိမ်မြောက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစည်းအဝေးတွင် ဧရာဝတီဘဏ်၏ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တည်ထောင်သူ ဦးဇော်ဇော် (Founder and Chairman) မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်း၏ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး၌ မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်၏ အမှုဆောင် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စောဦး (Executive Chairman) အား ရွေးချယ်ခံရခြင်းအတွက် ဧရာဝတီဘဏ် အနေဖြင့် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း […]
မီတာခများ သတ်မှတ်ရက်တွင် မပေးဆောင်က မီးဖြတ်မည်ဟု ကြေညာ
May 14, 2021 Cele Fans Comments Off on မီတာခများ သတ်မှတ်ရက်တွင် မပေးဆောင်က မီးဖြတ်မည်ဟု ကြေညာ
လျှပ်စစ်မီတာခများကို သတ်မှတ်ထားသည့် နောက်ဆုံးရက်များအတွင်း ပေးဆောင်ခြင်းမပြုလျှင် ထိုမပေးဆောင်သည့် အိမ်များကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြတ်တောက်သွားမည်ဟု ယနေ့တွင် ၎င်းတို့၏ ဝါဒဖြန့်နေသော သတင်းစာမှ ကြေညာခဲ့သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးပေးနေရာတွင် နိုင်ငံပိုင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရေးမှ ဖြန့်ဖြူးပေးနေသလို လိုအပ်သည့်ဓာတ်အားပမာဏကို ပုဂ္ဂလိကမှ ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးပေးရသဖြင့် မီတာခများ ပေးဆောင်မှသာ စဥ်ဆက်မပြတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ကြေညာချက်တွင် ပါဝင်သည်။ သို့သော် ပြည်သူအများက စစ်တပ်အာဏာသိမ်းသည်ကို ကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့် မီတာခများကို […]